Haddii aad tahay Iskaabulo, Halkan ka akhri 4 qodob oo kaa caawinaya inaad nolosha…. | shumis.net
Home » galmada » Haddii aad tahay Iskaabulo, Halkan ka akhri 4 qodob oo kaa caawinaya inaad nolosha….
Pam Krueger waa gabar ku dhiirigelisa haweenka inay keyd sameystaan sidoo kalena qaabka ugu habboon u maalgeliyaan hantidooda. Pam Krueger ayaa muddo dheer ku howlaneyd arrintaan.
Title: Haddii aad tahay Iskaabulo, Halkan ka akhri 4 qodob oo kaa caawinaya inaad nolosha….